Engagement zvindori zvevakadzi nevarume.
Tsika dzekubatanidza zvindori dzinosiyana maererano nenguva, nzvimbo, uye tsika. Nheyo yekubatanidza yakave yakamboitika kare, uye apo chipo chakadaro chakapiwa, chakange chakaparadzaniswa kubva kumhete yechato.
Kuita mishonga yevakadzi
Vakadzi, teererai. Iwe wakarota nezvezuva rako rinokosha kubva pauri muduku. Wakafungidzira nguvo yako, mhemberero, kutamba kwokutanga; zvinhu zvose. Asi, wakamborega kufunga pamusoro pekuti ndezvipi zvakasiyana-siyana zvekubatanidza zvindori zvevakadzi kune?
Zuva rako rakakwana, hongu, rinokosha zvikuru. Zvisinei, chindori chimwe chinhu iwe uchapfeka zuva rega rega kweupenyu hwako hwose uye inofanirwa kuva yakakwana.
Kushandira zvigaro zvevarume
Kana vakadzi vachigona kupfekedza zvindori zvekuita kuti vazivise chimiro chavo, nei varume vasingagoni? Zvakanaka, hapana chaicho chikonzero. Sezvo vamwe vakaroorana vanosarudza murume kuti apfeke uchapupu hwehupenyu hwavo uye sevanhu vanobvuma nyore nyore hukama huripo.
Roza goridhe, goridhe chena, goridhe tsvuku, platinum kana palladium?
Mazvigadzirwa zvemazuva ano ane ruzivo rwezvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshamisa zvemasimbi mumarudzi akasiyana. Nepo zvisarudzo zvakadai seplatinum ne palladium zviri kuve yakakurumbira, goridhe nguva dzose chisarudzo chinoshamisa. Kudzidza pamusoro pekusiyana pakati pegoridhe tsvuku nekutsvaga goridhe nemhete dzegoridhe mutsvuku inzira yakanaka yekuderedza zvingasarudzwa paunosarudza kuti tsvina ipi inosarudza yezvishongo izvo zvinozofananidzira rudo muupenyu hwako.
Usavhunduswa nemari. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekukwanisa kushandiswa zvindori. Zvechokwadi, zvinoreva "zvigone" zvinonyanya kuzviremekedza. Asi apo hutano huripo hungave hwakasiyana, munhu wose ane imwe.
Round solitaire, ovari, emerald, peari kana mutsikadzi akacheka madhayamondi, kusanganiswa kwemavara, maumbirwo uye maonero haasisina zvigaro.
Imwe yeaya mana maC (Carat Kurema, Kucheka, Ruvara, Kujeka) inofambiswa nedhaimani chati inoratidza kusiyana kwemakero. Mushure mekudzidza zvakawanda, kana iwe uchida kuona madhaimani mumunhu, shanyira chitoro chako chemuno zvishongo. Wana nzwisiso iri nani yeizvo iwe pachako unokoshesa mu diamond.
Nheyo dzinogadzirwa nematombo ndiyo sarudzo yakakwana yehutano hwakasiyana-siyana, hushoma hwetsika nechapenya ruvara uye chimiro. Zvimwe zvakafanana nezvindori zvakafuridzirwa zvevintage, mabheti emabwe anoitwa nemhando dzemhando, kubva emerald uye rubies kusvika kumafirofi, morganites, opals ... Kazhinji yakagadzirwa nechinhu chakaita sedombo rekati iro rakakombwa nemadhinari maduku kana mabwe asina kuvezwa.
Mumakore ose aya pane zvakawanda zvakagadziriswa mabheji, vakadai saTiffany, Cartier naHarry Winston, vane mazita avo akafanana nemafambisirwo emafambisirwo uye kuwedzera. Kunyorera madhayamondi asingasviki uye akasiyana uye kushamwaridzana nevapfumi uye vanozivikanwa nevatengi vanowanzoita musangano wekugadzira mabheji vanonyanya kukudzwa uye chete. Inonyanya kuzivikanwa munyika yezvishongo zvekugadzirira kuti muumbi uye zita rekushongedzwa kwezvishongo zvinowanzokosha.
Vagadziri vedu vanogona kugadzira tsika yakagadzirirwa iwe chete. Neine zvakawanda zvingasarudzwa, une chokwadi chekuwana rhete yakakwana yenguva yako yakakwana.